Fanodikodinana tosika fameno :: Miampanga sefo fokontany ny ankamaroan'ireo fitarainana iray alina • AoRaha
Fanodikodinana tosika fameno Miampanga sefo fokontany ny ankamaroan’ireo fitarainana iray alina
Sesilany ireo fitarainana voarain’ny Tahirim-bola misahana ny Fampandrosoana (FID) momba ny fanodinkodinana ny fanampiana aratsosialy voatokana ho an’ireo tokantrano tena marefo na ny Tosika Fameno. Fitoriana miisa iray alina teto andrenivohitra no tonga eny am-pelantanan’izy ireo, araka ny nambaran’ny Tale jeneralin’ny FID, Andrianantenaina Jaona, nandritra ny fanaovantsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa miaraka amin’ny Transparency Initiative Interantional Madagascar tetsy Anosy, afak’omaly. Voatonona matetika ao anatin’ny fitoriana ireo sefo fokontany.
“Vita fanadihadiana ny 30%-n’ireo fitarainana, amin’ izao fotoana izao, ka mba hanatrarana an’ireo tompon’antoka, izay mety nanodinkodina ny anjara fanampiana ho an’ny hafa, no anton’izao fifanomezantanana amin’ny Transparency International, fikambanana mpiady amin’ny kolikoly izao”, hoy izy.
Mifototra amin’ny fisitrahan’ny olona manan-katao eo anivon’ny fiarahamonina ny Tosika Fameno, ny fahazoan’ny tokantrano sasany an’izany imbetsaka, ny tsy fahazoan’ireo olona tena sahirana ny fanampiana ary ny fanararaotam-pahefana ataon’ireo mpiasan’ny fokontany sasany ny ankamaroan’ireo fitarainana nataon’ny olon-tsotra. Ireo sefo fokontany no betsaka voampanga ho nanao kolikoly, indrindra amin’ny fitakiana vola amin’ireo olona izay vao avy nahazo ny Tosika Fameno.
Nilaza ny tsy hipetrapotsiny ny FID sy ny Transparency International fa hanao ny dingana rehetra hamongorana an’ireo mpanodinkodim-bola sy mpanao kolikoly. Manentana hatrany ny vahoaka kosa ry zareo mba hitoroka ny tranga fanararaotam-pahefana samihafa eny anivon’ny fokontany eny, mandritra ny fizaràna an’ireo fanampiana aratsosialy.
Kitra an-tora-pasika :: Mety hihemotra ny CAN 2020 amin’ny « beach soccer »